SIDA LOO DOORTO BEERTA CAWSKA, NOOCYADA IYO NOOCYADA DHIRTA BEERTA LEH SHARAXAAD IYO SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Noocyada geedo qoryo ah waxay si aad ah u kala duwan yihiin - Xitaa saynisyahannadu si sax ah uma xisaabi karaan lambarkooda, waxay ku magacaabaan tirooyinka min 12 illaa 25 iyo doodo kulul: oo ay qoysku ama caanuhu u qaataan tan ama noocyadaas. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan noocyada dhirta qoryaha laga bilaabo taariikhda hore ayaa waxaa isticmaala nin.
Warshadani waxay ku raaxeeysataa jacaylka ninka, maxaa yeelay waxay leedahay:
jilicsan iyo qoryo fudud oo leh waxyaabo sarre leh (badeecada qoryaha ayaa si fiican loo ilaalin karaa qarniyo);
Guryaha fungicidal (fangaska iyo sheyga kale ee ka hortagga dhirta);
caraf udgoon (foox laga sameeyey tar);
quruxda iyo qurxinta.
Ma taqaanaa? Magaca dhirta ayaa ka yimid qoraallada hore ee Giriigta. Khayaali wuxuu ka hadlayaa Cypress - wiilka reer boqorka ah ee jasiiradda Keos, oo si khalad ah u dilay dilkiisa muqaddiisa ah ee jilicsan, isagoo aan wax u dhimeyn, ma rabin inuu sii noolaado. Si uu uga badbaadiyo geerida, Apollo wuxuu u jeestay nin dhallinyaro ah oo geedka quruxda badan - qoryo.
Qoryaha beerta: sharaxaad guud
Qaybaha (Cupressus) - Duufaan cadaan ah, oo si ballaaran u degay duufaan diiran iyo aagag hooseeya. Warshad muddo dheer ah (geedaha qoryaha qaarkood waa dhowr kun oo sano) si dhakhso ah uma koraan. Wuxuu gaaraa kobaca celceliska qiyaastii 100 sano.
Heerka dhererku wuxuu ku kala duwan yahay: beeritaanka wuxuu gaarsiisan yahay 1.5-2 m, jidka jidka wadada wuxuu u kori karaa ilaa 30-40 m.Dhammaan xulashada, cypresses-cuubs ayaa sidoo kale la helay. Cawsatka intooda badani waxay leeyihiin guntin toos ah, tufaaxa ama kolonovidnoy tufaax (lafaha cagaarka ayaa kora, koriinka garabka). Waxyaabaha aan caadiga ahayn waxaa ka mid ah qaababka dhirta qaababka fidinta duurka.
Caleenta dhuuban beerta cawska ah, dhirbaaxo dhoobo dheer. Pigmentation waxay ku xiran tahay da'da, on sapling - casaan, sanado badan oo tufaaxa cawl-brown xoojiyaa.
Laamuhu waxay ku yaallaan diyaarado kala duwan, si adag oo jeexan, caleemaha waa jilicsan iyo dhuuban. Caleemaha (cirbadaha) waa kuwo yaryar, xajmiga (dhirta dhirta ka yar 4 sano jir), lakulmayo laan, oo leh qanjirada dhinaca dorsada. Inta badan caleen waxay u hoggansantahay laanta. Pigmentation waa cagaar madow (si kastaba ha ahaatee, jiilaalka ayaa horumariyay noocyo badan oo leh midabyo kala duwan - buluug, jaalle, lacag).
Ciriiri - jimicsiyada. Seeds u dillaacin keynta qoryaha dusha sare ah oo daboolay qiyaasaha tirakoobka.
Cirifka qurxinta wuxuu kordhiyaa da'da.
Ma taqaanaa? Qalabku wuxuu nadiifiyaa hawada, wuxuu soo nuugaa biraha culus iyo walxo kale oo waxyeelo leh, wuxuu soo saaraa xaddi badan oo ogsijiineed ah wuxuuna leeyahay sifooyin phytoncidal ah.
Marka beeritaanka cawsku ku jiro dhul furan, waa in loo tixgeliyaa heerkulku. Qaybta dhexe, Arizona, noocyada caadiga ah (cadarka) iyo noocyada Mexican ayaa ku habboon.
Cyrus Arizona (C. arizonica) waxay ku sii dillaacdaa waqooyiga Ameerika (laga bilaabo Arizona ilaa Mexico), waxay jecel yahiin buuraha buuraha (dhererka 1300 ilaa 2400 m). In Europe, ay taranka ujeedooyinka qurxinta (qurxinta beeraha, beeraha, abuurista ee dayrarka) bilaabay in 1882.
Heerka geedaha qaangaarka ah wuxuu gaaraa 21 m. Wuxuu noolaan karaa ilaa 500 sano. Waa in lagu dhajiyo maskaxda in midabka carku ku xiran yahay da'da geedka iyo caleemaha: cawl on caleemaha yar yar iyo bunni madow ee old. Cirbadaha - hooska buluug-cagaaran. Qaab kale oo ka mid ah cypress Arizona - dhirta qoryaha.
Si ka duwan noocyada kale ee caankan, dhirtiisu waa mid culus oo adag, sida walnut. Gabdhaha yaryar waa midab midabo casaan ah, ka dib markii koriinku uu helo midab buluug ah.
Warshadu waxay jecel yihiin baraf barafaysan oo baraf ah (inkastoo ay u dulqaadan karto dhaxan ilaa 25 ° C) iyo xilliyada qallalan (aboorka dulqaadka sare). Si dhakhso ah u kora.
Waa muhiim! Qorraxda tooska ah waxay wax u yeeli kartaa caleemaha dhalinyarada, waxay u horseedaa qallajinta (tani waxay saameyn doontaa muuqaalka muuqaalka geedka). 3 sano ee ugu horreeya ee geedaha nool ee geedaha Arizona waa in la daboolo xilliga jiilaalka.
Isticmaalidda xayawaanka beerta sida saldhig, suuqyadu waxay keeneen noocyo cusub:
Ashersonian - Cawska hooseeya ee koraya;
Isafgarad - Buunshaha midabka cagaaran-buluug ah ee cirbadaha geedaha;
Konica - way kala duwan yihiin taajka lakabka ah, cirbadaha cawl-buluuga ah (uma dulqaadanayo qabow);
Pyramidalis - cirbadaha buluuga ah iyo taakuleeciga.
Cudurka Meksika ah ee loo yaqaan 'Supressus lusitanica Mill' dabiiciga ah waxaa laga heli karaa Bartamaha Ameerika. Waxaa markii ugu horeysay lagu sharraxay Bortuqiis 1600. Waxaa lagu kala gooyay taajkii ballaaran ee dhirta, dhererkeedu wuxuu gaari karaa 30-40 m. Wuxuu ku koraa carrada qalalan ee liita. Cirbadaha waa dhaadheer, iskuxirid xagal qumman, midab madow ah. Cones waa yar tahay (1.5 cm), cagaaran-buluug (caleen) iyo bunni (baaluq). Noocyada ugu caansan:
Bentam - Waa mid cajiib leh in laamuhu koraan hal diyaarad, waxay sameeyaan taaj cidhiidhi ah, irbadaha ayaa leh midab buluug ah;
Glauka - Midabka buluugga ah ee cirbadaha cirbadaha iyo laamaha koraya isla hal diyaarad. Cones waxaa lagu daboolay ubaxyada naqaska;
Tristis (murugo) - wuxuu leeyahay taajka kolonovidnuy, caleemaha waxaa lagu hagaajiyaa hoos;
Lindley - leh burooyinkeeda waaweyn iyo laamaha midab cagaaran oo qoto dheer.
Waa muhiim! Noocyada qurxinta ee qoryaha Mexican - maaha baraf u adkaysta iyo si liidata u dulqaadan abaarta.
Barafka cadceedda ah
Cabbiraadaha Evergreen (sempervirens) ama qoryaha Talyaaniga waa wakiilka Yurub ee keliya ee geedaha qoryaha (Mediterranean Mediterranean waxaa loo tixgeliyaa meesha uu ku dhashay). In foomka duurjoogta ah, foomka dushiisa waa faafin (sidaas darteed magacaabay sababtoo ah caleemaha dheer iyo qorraxda koraya) - ee Faransiiska, Spain, Talyaaniga, Giriigga, Waqooyiga Afrika. Kacaanka isku midka ah ee loo yaqaan "Colon-like" waa natiijada xulashada (isticmaalka dhaqameedku wuxuu bilowday 1778).
Wuxuu u kori karaa 34 m (sida caadiga ah, da'da 100). Waxay ku koraan carrada saboolka ah ee buuraha iyo buuraha. Haysashada caabbinta barafka wanaagsan (ilaa -20 ° C), dari kara.
Cirbadaha aan la midka ahayn ayaa ah mid yar, midab madow oo midab leh. Cinjir-buni-cawlan waxay ku koraan laanta yar. Heerka kobaca ee xawaaraha Talyaanigu wuxuu ku xiran yahay da'diisa - kuwa yaryar, dhaqso. Heerka ugu sarreeya ayaa la gaari doonaa marka cawsku uu yahay 100 sano.
Thanks to dadaalka loo yaqaan 'cedpress breeders' waxaa loo isticmaali karaa ma aha oo kaliya in lagu qurxiyo beerta jardiinada, square ama avenue, laakiin sidoo kale beerta iyo beerta. Laga soo bilaabo noocyada ornamental ee qoryaha cadho ah is-nidaamis badan yihiin:
Fasciata Forluselu, Montros (naar);
Indica (taajka xiirta);
Stricta (taajka pyramidal).
Ma taqaanaa? Kombiyuutarka ayaa isku daraa wax aan haboonayn. Qaar ka mid ah nidaamyada diimeed, waxay u dhaqmaan sida calaamad u ah dhimasho iyo murugo (Masaarida qadiimiga ah ee loo isticmaalo geedaha xayawaanka ah ee loo yaqaan 'rooting'), qoraxda loo yaqaan 'lahjubka', Giriiggii hore ayaa u aqoonsaday inay calaamad u tahay ilaahyada dhulka hoostiisa - waxay ku bexeen godad xabuubyo ah oo ay laamoodaan oo ay laamoodaan. Qaar kale, waxay calaamad u tahay dib-u-dhalashada iyo dhimashada (Zoroastrianism iyo Hinduism, qoryuhu waa geed ciirsi ah, oo ka mid ah Carabta iyo Shiinaha waa geed nololeed, laga ilaaliyo waxyeelada).
Qoyska qashinka ah waa mid aad u ballaaran. Inta badan, dhirta cawska waxaa ka mid ah dhirta sida cypress, noocyo badan oo loo isticmaalo beerashada gudaha iyo beerta, iyo sidoo kale bogga bogga. Tani maaha mid run ah. Labadan dhir ayaa sidoo kale ka mid ah qoyskooda qoryaha, laakiin waxaa lagu daraa sheyga kale, Chamaecyparis (cypress) iyo Taxodium distichum (cypress cypress).
Cawska, Soddheerka labadaba (Taxodium distichum) ama caan ah, waxay ka timaadaa aagga qulqulka ah ee xeebta koonfur bari ee Waqooyiga Ameerika (Florida, Louisiana, iwm) - halkan waxaad ka heli kartaa warshadda duurka. Noocyada dhaqameedu waxay ku faafeen adduunka oo idil (Yurub, horay loo yaqaanay qarnigii 17aad). Magaca "Taxiodium double tax" waxaa loola jeedaa isku midka ah yew iyo goobta caleemaha.
Warshadku waa mid sare (36m), geed weyn oo leh dhumuc ballaadhan oo ballaaran (oo ah giraanta 3 ilaa 12 mitir), oo leh cirbado jilicsan, oo la jaro jiilaalka, iyo guduud khafiif ah oo casaan ah (10-15 cm). Cones waxay u egtahay xakab, laakiin aad u nugul. Tilmaamaha gaarka ah ee taariiqda safka laba-laabka ah waa dheeh ama dhalo-dheere ah sida kor u kaca (pneumatore) ("neefta qaado"). Tani waa kuwa loo yaqaan. xididdada xajmiga ee maskaxda ku jirta oo kora dhulka korodhka 1 ilaa 2 m.
Pneumatics waxay noqon kartaa mid, laakiin way wada koraan oo waxay samaysan karaan derbi ah tobanaan mitir. Waad ku mahadsantahay xididahan, dhirta waxay ku noolaan karaan daadad waqti dheer ah.
Ma taqaanaa? Qoryaha loo yaqaan 'taxiodium laba' ayaa loo yaqaan "geedi weligeed ah". Waa mid aad u iftiimaya, ma siinayo duufaan, wuxuu leeyahay midabyo kala duwan (casaan, jaalle, cad, iwm). Kalluumeyaha leh satin satin "satin been ah", kalluumeysiga kalluumeysiga, iyo alaabta qurxinta waxaa laga sameeyaa qoryahan. Maraykanku wuxuu u dhoofiyaa Yurub.
Doorashada saxda ah ee beerta xayawaanku waa inay tixgelisaa ma aha oo kaliya noocyada iyo noocyada la rabay, laakiin, ugu horreyntii, shuruudaha uu korriinku korayo. Xaaladaha oo dhan, geedo xoog leh ayaa ku farxi doona oo keliya adiga, laakiin sidoo kale caruurta, dhaleen iyo awoowe-weynta ee qoyskaaga.